စပါးအသာရနေတဲ့ ကစားသမား ၊ လီဗာပူး စိတ်ဝင်စားတဲ့ ဘာဆာကြယ်ပွင့် ၊ လာပေါ်တာကို သတိပေးလိုက်တဲ့ မက်ဆီ တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
စပါးအသာရနေတဲ့ ကစားသမား ၊ လီဗာပူး စိတ်ဝင်စားတဲ့ ဘာဆာကြယ်ပွင့် ၊ လာပေါ်တာကို သတိပေးလိုက်တဲ့ မက်ဆီ တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး နည်းပြကြီး အန်တိုနီယို ကွန်တီ က သူဟာ လန်ဒန် ကလပ်မှာ ဆက်လက် လုပ်ကိုင် သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။ ကွန်တီ ဆက်နေမယ် ဆိုတဲ့ သတင်းဟာ ဟယ်ရီကိန်း ကို အသင်းမှာ ဆက်ထိန်းထားဖို့ အရေးပါတဲ့ အချက်လည်း ဖြစ်လာစေ နိုင်တယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက သုံးသပ် ထားကြပါတယ် ။
စပါး ဟာ အင်တာ ကနေ ထွက်ခွာလာပြီ ဖြစ်တဲ့ အိုင်ဗန် ပါရီဆစ် ကို ချဲလ်ဆီး ၊ ယူဗင်တပ် တို့ထက် လက်ဦးမှု ရယူပြီး ခေါ်ယူ နိုင်ဖို့ နီးစပ် နေတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
စပါး ဟာ ရာသီကြို ခြေစမ်းပွဲ အဖြစ် ရိုးမား အသင်းနဲ့ ဇူလိုင် ၃၀ မှာ ခြေစမ်း ကစားသွားမယ်လို့ ထုတ်ပြန် အသိပေး သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အဲဗာတန် တိုက်စစ်မှူး ဆော်လမွန် ရွန်ဒွန် ကို ရီးရဲ မာယော့ကာ အသင်းက ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စား နေတယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
PSG ဟာ နေမာ ကို ရောင်းထုတ်ဖို့ ဆန္ဒ ရှိနေပြီး ထိပ်သီး ကလပ်တွေ ထံ ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားဖို့ ရှိနေတယ်လို့ သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
ချန်ပီယံလိဂ် ဖိုင်နယ် ကစားမယ့် လီဗာပူး တိုက်စစ်မှူး ဆာဒီယို မာနေး ဟာ ဘိုင်ယန်မြုးနစ် အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ စိတ်ကူး ထားတယ်လို့လည်း သတင်း ထွက်ပေါ် နေပါတယ် ။
မာနေး ကတော့ သူ့ရဲ့ အနာဂါတ် ကို ဒီကနေ့ည ဗိုလ်လုပွဲ ပြီးပါက ထုတ်ဖော် ပြောပြ သွားမယ်လို့ ပြောဆို ထားခဲ့ ပါတယ် ။
လီဗာပူး ကစားသမား ၂ ယောက် ဖြစ်တဲ့ သီယာဂို အယ်ကန်ထရာ နဲ့ ဖာဘင်ဟို တို့ဟာ ရီးရဲ မက်ဒရစ် နဲ့ ရင်ဆိုင် ကစားမယ့် ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲ မှာ ပါဝင်ကစားဖို့ ကြံ့ခိုင်မှု ကောင်းစွာ ရှိနေကြပြီ လို့လည်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
လီဗာပူး အသင်း ကတော့ ဘာစီလိုနာ လူငယ် ကစားသမားလေး ဂါဗီ ကို စိတ်ဝင်စား နေပြီး ၁၇ နှစ်သားလေး ရဲ့ စာချုပ် ဖျက်သိမ်းကြေး ( ပေါင် ၄၂ သန်း ) ကို ပေးချေကာ ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ကူး ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
လီဗာပူး တိုက်စစ်မှူး အိုရီဂီ ကတော့ အေစီမီလန် အသင်းဆီ ပြောင်းရွှေ့ဖို့ အလွန်နီးစပ် နေပြီလို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ရီးရဲမက်ဒရစ် ဟာ မိုနာကို ကြယ်ပွင့်လေး ချူဝါမာနီ ကို နွေရာသီရဲ့ ပထမဆုံး ပစ်မှတ် အဖြစ် သတ်မှတ် ထားပြီး ချန်ပီယံလိဂ် ဖိုင်နယ် အပြီးမှာ ညှိနှိုင်းမှုတွေ စတင် ပြုလုပ် သွားဖို့ အစီအစဉ် ရေးဆွဲ နေကြတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
ဆီဗီးလား ကတော့ ပြင်သစ် ခံစစ်မှူး ဂျူးလ် ကွန်ဒေး ကို ယူရို ၆၅ သန်း အနည်းဆုံး ရရှိမှ စဉ်းစား သွားဖို့ ရှိနေပြီး ဒီယေဂို ကားလိုစ့် ကို ဗီလာ ထံ ရောင်းထုတ်ထားပြီး ဖြစ်တာကြောင့် နောက်ထပ် ခံစစ်သမား တယောက်ကို လွယ်လွယ် ရောင်းထုတ်မသွားဖို့ စဉ်းစား ထားတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
PSG မှာ ကစားနေတဲ့ လီယွန်နယ် မက်ဆီ နဲ့ သူ့ရဲ့ ကိစ္စ အ၀၀ ကို တာဝန်ယူ ကိုင်တွယ်ပေးနေတဲ့ ဖခင် ဟော်ဟေး တို့ဟာ ဘာစီလိုနာ ဥက္ကဌ လာပေါ်တာ ကို မက်ဆီ ရဲ့ အနာဂါတ် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခဏခဏ ပြောဆို သုံးသပ်တာတွေ မပြုလုပ်ပေးဖို့ သတိပေး ပြောဆို သွားခဲ့တယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ စီးတီး ရဲ့ ဂန္ထဝင် တိုက်စစ်မှူးကြီး ဆာဂျီယို အဂွေရို ကတော့ ဒီကနေ့ည မှာ ရီးရဲ မက်ဒရစ် က လီဗာပူး ကို အနိုင် ကစားပြီး ချန်ပီယံလိဂ် ဖလားကို ရယူ သွားမယ်လို့ ခန့်မှန်း ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ခင်ဗျာ . . . ။
Previous Article ဒဏ်ရာပြသနာ သတင်းကောင်းတွေ အပြင် မာနေးနဲ့ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်တို့ရဲ့ အပြောင်းအရွေ့သတင်းတွေကို တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ ကလော့
Next Article ချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ်မှာ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် အတွက် အဆုံးအဖြတ် ပင်နယ်တီ ကန်ဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေတဲ့ ကော်တွိုက်စ်